संसदमा गोकुल बाँस्कोटा : आफैँ अड्काउने, आफैँ पड्काउने ? - Safalnews- News Portal from Nepal in Nepali.
संसदमा गोकुल बाँस्कोटा : आफैँ अड्काउने, आफैँ पड्काउने ?
सफल न्युज द्वारा २०७७ चैत्र २३ गते सोमबार १६:१५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बचाउ गरेका छन् । उनले सरकारले विकास निर्माणका काम अघि बढाएको, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई उच्च बनाएको भन्दै चुनावलाई प्रतिगमन भन्ने दलहरुले कस्तो अग्रगमन खोजेको भन्दै प्रश्न गरे ।
सोमबारको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका बाँस्कोटाले संसदमा सरकार, विकास र राजनीतिक जटिलताका बारेमा उठेका प्रश्नहरुको सरकारका तर्फबाट बचाउ गरेका हुन् ।
‘यसरी काम गर्न खोज्दा पनि माखोल उडाउन खोजिन्छ र खुसी व्यक्त गर्न सकिँदैन भने म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु । आखिर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू के चाहान्छन् । उनको विकासको एजेण्डा के हो ? राजनीतिक मुद्दा के हो ? जनताका बीचमा के भनेर जान चाहेको हो ? स्पस्ट हुनुपर्छ’, बाँस्कोटाले प्रश्न गरे । उनले एजेण्डा विहीन नेतृत्वले केही गर्न नसक्ने भन्दै विरोधका लागि विरोध गर्दा सही गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताए । ‘तथ्यमा जान म अनुरोध गर्छु विकास नगर्ने हो भने राजनीतिक दलको औचित्य के ?’, बाँस्कोटको प्रश्न छ ।
गृहमन्त्री बादललाई पनि माओवादी केन्द्रले गर्‍यो कारबाही
मुख्यमन्त्री गुरुङको कुर्सी हल्लाउने विपक्षीको प्रयास, तीन दल एक…
नयाँ खालको क्रान्ति गर्ने प्रचण्डको घोषणा